I-Wenxin Xiaoju Nordic Style (kufuphi nololiwe ohamba ngesantya esiphezulu, isikhululo sebhasi, isikhululo segesi, intengiso yemveliso yasekhaya, indawo ebukekayo yaseWanda Tianbao, ipaki, iJiayuguan Fangte iLizwe elonwabileyo) - I-Airbnb
I-Wenxin Xiaoju Nordic Style (kufuphi nololiwe ohamba ngesantya esiphezulu, isikhululo sebhasi, isikhululo segesi, intengiso yemveliso yasekhaya, indawo ebukekayo yaseWanda Tianbao, ipaki, iJiayuguan Fangte iLizwe elonwabileyo)
Indlu yonke sinombuki zindwendwe ongu玲
I-Xiaoju ikwisitrato esikhulu.Zimbini iinketho zokupaka simahla kunye nendawo yokupaka ehlawulelwayo.I-100m ukuya emantla kukho isikhululo segesi, kwaye emazantsi kukho isikhululo sikaloliwe, esinokufikelelwa kwimizuzu emihlanu ngemoto. Empuma yimizuzu emihlanu xa uhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe esinesantya esiphezulu. Ukuya eJiayuguan, ukuhamba ngemizuzu eyi-15 kuya kukusa apho. I-Xiaoju ijikelezwe ziindawo ezahlukeneyo zokuzonwabisa, iimarike zentengiso yesikhumbuzo, izikolo, iindawo ezintle zaseTianbao, iipaki, iimarike zasebusuku...
I-Xiaoju ibekwe kwisitalato esikhulu i-100m ukuya emantla isikhululo segesi, kwaye emazantsi kukho isikhululo sikaloliwe, esinokufikelelwa kwimizuzu emihlanu ngemoto. Empuma yimizuzu emihlanu xa uhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe esinesantya esiphezulu. Ukuya eJiayuguan, ukuhamba ngemizuzu eyi-15 kuya kukusa apho. I-Xiaoju ijikelezwe ziindawo ezahlukeneyo zokuzonwabisa, iimarike zentengiso yesikhumbuzo, izikolo, iindawo ezintle zaseTianbao, iipaki, iimarike zasebusuku...
Ngokufika kobusuku, ngaphaya kwendlela kukho i-neon edanyazayo, ephithizelayo yaseLong Street Night Market. Kukho iintlobo ngeentlobo ze-snacks zikasaziwayo kwi-Intanethi, iimfuno zemihla ngemihla, ukutya, kunye nezixhobo. Yeyommandla ochumileyo. Kwaye kukho iindawo zokupaka, ukuthenga kulula, kwaye indawo yokupaka ilungile. Ezinzulwini zobusuku, kuthe cwaka kwaye akukho ngxolo, kwaye kukunika ixesha elimnandi "elinobuhle kodwa lingabonakali".
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jiuquan